Google Earth software yakauya kuzoshandura nzira yatinoona nayo nyika. Ruzivo rwekutenderedza nharaunda nepo asi nehukuru hwekusvika kune chero chikamu chenyika, sekunge tiripo. Iyi ndiyo yakasarudzika kosi, kubva kune zvekutanga zvekufamba kusvika pakuvaka kwekushanya ...
Makosi - LandWorks Google Earth makosi Google Earth
Nzira yekusimudza sei 3D zvivakwa muGoogle Earth
Vazhinji vedu tinoziva chishandiso cheGoogle Earth, ndosaka mumakore achangopfuura takaona shanduko yayo inonakidza, kutipa mhinduro dzinowirirana zvinoenderana nekufambira mberi kwetekinoroji. Ichi chishandiso chinowanzo shandiswa kutsvaga nzvimbo, tsvaga mapoinzi, kubvisa mahwendefa, kuisa data renzvimbo kuti uite rumwe rudzi rwe ...
Google pasi / mamapu
Ona UTM inogadzirisa muGoogle Maps uye Street View
Nhanho 1. Dhawunirodha data feed template. Kunyangwe hazvo chinyorwa ichi chakanangana nehurongwa hweUTM, iko kunyorera kune matemplate ari muchadenga nehurefu nemadhigirii ekupedzisira, pamwe nemadhigirii, maminetsi nemasekondi. Nhanho 2. Isa template. Pakusarudza template ine data, ...
Google Earth Kml Office kuti zvinouraya
Nzira yekutsvaga mifananidzo kubva kuGoogle Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery nemamwe magwaro
Kune vazhinji vevaongorori, avo vanoda kuvaka mepu panoratidzwa raster kubva kune chero chikuva senge Google, Bing kana ArcGIS Mifananidzo inoratidzwa, isu tine chokwadi chekuti hatina dambudziko nekuti ingangoita chero chikuva chinokwanisa kuwana masevhisi aya. Asi kana izvo zvatinoda kurodha pasi iyo mifananidzo mune yakanaka resolution, saka ndedzipi mhinduro senge ...
Featured, Google pasi / mamapu, Virtual Earth
Dharira mapeji uye uronga nzira inoshandisa BBBike
BBBike chikumbiro chine chinangwa chikuru ndechekupa nzira yekuronga yekufamba, nebhasikoro, kuburikidza neguta nenzvimbo dzaro. Isu tinogadzira sei nzira yedu kuronga? Chokwadi, kana tikapinda webhusaiti yako, chinhu chekutanga chinoonekwa irondedzero ine mazita emaguta akasiyana siyana, pakati pe ...
Google Earth VanaChiremba vezvirwere zvese Kml
Wona Google Earth inowirirana muExcel - uye uvashandurire kuUTM
Ndine dhata muGoogle Earth, uye ini ndoda kuona iwo marongero muExcel. Sezvauri kuona, inyika ine ma vertices manomwe uye imba ine mavhenekeri mana. Sevha data reGoogle Earth. Kuti utore iyi data, tinya kurudyi pane "Nzvimbo Dzangu", uye sarudza "Sevha nzvimbo se ..." Nekuti iri faira ...
Downloads, Google pasi / mamapu
Chengetedza utm zones dzeGoogle Earth
Iyi faira ine nzvimbo dzeUTM mune kmz fomati. Kamwe kurodha pasi unofanirwa kuisunungura. Dhawunirodha faira apa Dhawunirodha faira apa Sechinongedzo ... nzvimbo dzenharaunda dzinouya kubva pakupatsanura nyika kuita zvikamu sezvataizoita apuro, akacheka akamira akagadzirwa nema meridians (anonzi marefu) uye ne ...
Open shp mafaira pamwe Google Earth
Iyo vhezheni yeGoogle Earth Pro yakamira kubhadharwa kare kare, izvo zvinoita kuti uzarure akasiyana maGIS neRaster mafaera zvakananga kubva kuchishandiso. Isu tinonzwisisa kuti kune nzira dzakasiyana dzekutumira SHP faira kuGoogle Earth, kungave kubva kune vezvinhu software senge BentleyMap kana AutoCAD Civil3D, kana yakavhurwa sosi ...
Geospatial - GIS, Google pasi / mamapu
Geomarketing vs. Kuvanzika: Mhedzisiro yeGeolocation pane yakajairika mushandisi
Kubva payakapihwa muindasitiri yekushambadzira, geolocation yave fashoni fungwa, ichionekwa seimwe yezvakanakisa zvemafoni nhare, zvichienzaniswa nePC, mumaonero evashambadzi. Nekudaro, iyo nyaya yekuvanzika inokurukurwa, iyo, sekureva kwevamwe, iri ...
Ratidzai QGIS data kuGoogle Earth
GEarthView ipulagi yakakosha iyo inobvumidza iwe kuti uite inoenderana maonero eiyo Quantum GIS kutumirwa paGoogle Earth. Maitiro ekuisa iyo plugin Kuisa iyo, sarudza: Wedzera-ons> Gadzirisa zvinowedzerwa uye uzvitsvage, sezvakaratidzwa mumufananidzo. Kamwe iyo plugin yaiswa, inogona kutariswa mune yekushandisa.…
Geospatial - GIS, Google pasi / mamapu, qgis
AutoCAD kosi - dzidza zviri nyore
Iyi ndiyo kosi yakagadzirirwa kudzidza AutoCAD kubva pakutanga. AutoCAD ndiyo inonyanya kufarirwa software yekubatsira dhizaini ...